San Gaetano, Saint nke ụbọchị maka 7 Ọgọst | Ilblogdellafede
San Gaetano, Saint nke ụbọchị maka 7 Ọgọst
(1 Ọktoba 1480 - 7 Ọgọst 1547)
Akụkọ banyere San Gaetano
Dịka ọtụtụ n'ime anyị, Gaetano dị ka onye a na-edugharịrị na ndụ "nkịtị": nke mbụ dịka onye ọka iwu, emesịa dị ka onye ụkọchukwu na-arụ ọrụ nke Roman Curia.
Ndụ ya wee bụrụ ihe pụrụ iche mgbe ọ sonyere Oratory of Divine Love in Rome, otu ndị raara onwe ya nye na nsọpụrụ na ọrụ ebere, n'oge na-adịghị anya emume ya mgbe ọ dị afọ 36. Na 42, o guzobere ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ na Venice. Na Vicenza, ọ ghọrọ akụkụ nke okpukpe okpukpe "nke a na-apụghị ịgbagha agbagha" nke mejupụtara naanị ụmụ nwoke n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala - yana ndị enyi ya katọrọ ya, ndị chere na omume ya bụ echiche ezinụlọ. Ọ chọrọ ndị ọrịa na ndị ogbenye nọ n’obodo ahụ wee jeere ha ozi.
Mkpa kacha mkpa n’oge ahụ bụ ndozigharị nke thatka nke ‘na-arịa ọrịa n’isi na ndị otu’. Gaetano na ndị enyi atọ ahụ kpebiri na ụzọ kachasị mma maka imezigharị ya bụ ịtụgharị mmụọ na ịnụ ọkụ n'obi ndị ụkọchukwu. Ha guzobere ọgbakọ a maara dị ka Theatines - site na Teate [Chieti] ebe bishọp mbụ ha kachasị elu nwere anya ya. Otu n'ime ndị enyị ahụ mechara bụrụ Pope Paul nke anọ.
Ha jisiri ike gbaga na Venice mgbe e bibiri ụlọ ha dị na Rome mgbe ndị agha Emperor Emperor V dupụrụ Rome na 1527. Ndị Theatines pụrụ iche n'etiti ndị ndozigharị ndị Katọlik guzobere tupu Ndozigharị ndị Protestant. Gaetano hibere monte de pieta - “ugwu ma obu ego nke puru iche” - na Naples, otu n’ime otutu ndi na erite uru na enyeghi ego na echekwa ihe. Ebumnuche ahụ bụ inyere ndị ogbenye aka ma chebe ha pụọ ​​n'aka ndị na-anara ya. Otu obere Cajetan mechara bụrụ thelọ akụ nke Naples, nwere nnukwu mgbanwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ bụrụ na a kwụsịrị Vatican nke Abụọ na nnọkọ nke mbụ ya na 1962, ọtụtụ ndị Katọlik ga-eche na e nweela nnukwu ihe kpatara uto nke Chọọchị ahụ. Cajetan nwere otu ụdị echiche ahụ maka Council of Trent, nke mere site na 1545 ruo 1563. Mana dịka o kwuru, Chukwu bụ otu na Naples dịka na Venice, ya na Trent ma ọ bụ Vatican II. Anyị na-emeghe onwe anyị n'ike nke Chineke n'ọnọdụ ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị, a na-emekwa uche Chineke. Standardskpụrụ nke ihe ịga nke ọma Chineke dị iche na nke anyị.
← Na post gara aga Gara aga post:Vozo Etu nke ụbọchị: Providence Chineke
Ọzọ Post → Post ozo:Vatican: Baptizim a na-eme "n'aha obodo" adabaghị